Sunday, 04.05.2020, 11:00pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 04.03.2012, 02:08pm
विगत सात वर्षदेखि यस स्तम्भमा आफ्नो देशमा वनमाराझँै फैलिदै र मौलाउँदै गएको अराजकता, विधि, विधान र दण्ड शून्यता, शासन एवं शान्ति सुरक्षा विहीनता, भ्रष्टाचारको व्यापकता, देशको शासन सत्ता नियन्ता बनेका राजनीतिक पेशेवर (नेता)हरूले सत्ता, शक्ति र स्वार्थका लागि निर्लज्जतापूर्वक भित्र्याउँदै र स्वीकार्दै गरेको परदासताकाबारेमा चिरफार गर्दै लेखिँदै आइएको थियो ।
Monday, 03.26.2012, 03:33pm
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि शब्दजालमा रुल्मुलिएको छ । जनतालाई आफूप्रति आकर्षित गर्न काम हैन त्यस्तै शब्दहरूको खेती नेताबाट भैरहेको छ । कहिले के त कहिले के भन्दै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम अहिले पनि जारी नै छ ।
Monday, 03.26.2012, 03:20pm
नेपालको जलस्रोत र जलविद्युतको सही विकासका निमित्त सबैभन्दा बाधक साबित यी प्रतिनिधिपात्रहरूले गरेको सबैभन्दा ठूलो काम हो, महाकाली सन्धिका नाममा नेपालको सिङ्गो नदीका रूपमा रहेको महाकालीको ‘कन्यादान’ ! महाकाली सन्धिमा भएका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई सच्याउने शर्तस्वरूप आफैँले पारित गरेको चारबुँदे सङ्कल्प प्रस्तावबारे समेत अडान लिन सकेनन् यिनीहरूले ।
Monday, 03.26.2012, 03:18pm
माओवादीको जन्म कसरी भयो भनेर इतिहास नियाल्ने हो भने पौराणिक कालका असुर वा दितीका सन्ततिको कथासंग मिल्दो पाउँछौं । नेपालका भू–सामन्त, वर्णाश्रम परक जातीयतावादी र कठमुल्लावादीहरूको भ्रुणलाई तीस वर्षे पंचायत कालमा परिपोषण गरियो ।
Monday, 03.26.2012, 03:16pm
डोरीमा हिंड्ने मान्छे सन्तुलन मिलाउन घरि देब्रे र घरि दाहिने ढल्केको हुन्छ । सोझै हिंड्यो भने लड्छ । राज्य चलाउनु भनेको पनि सन्तुलनमा अडिने कुरा हो ।
Friday, 03.23.2012, 03:19pm
नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र मौलिक संस्कृति मेटाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटा षड्यन्त्र भैरहेको कुरा आम जनतालाई जति ज्ञात छ त्योभन्दा बढी राजनीतिक तहलाई भए पनि उनीहरू यसबारे चुँ पनि गर्न सक्दैनन् ।
Friday, 03.23.2012, 03:18pm
कांग्रेस र माओवादीको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, विचार र वर्गीय जनाधार नितान्त भिन्न र विरोधाभासी मात्रै होइन, माओवादीको प्रमुख वर्ग शत्रु नै कांग्रेस भन्ने समेत कतिपय ठाउँमा उल्लेख भएको देखिएको थियो ।
संविधानको लोहोरो कहिले पाक्छ खै ? : महेश्वर शर्मा
Friday, 03.23.2012, 03:17pm
यहाँ संविधान दिन्छौं भन्नेले जनतालाई डुबाएर आफूहरूले राज गरिराख्ने बाटो समातेको देखेर दुनियाँले आश्चर्य मानेको छ । अझै पनि जनताका आँखाले छारो हाल्न खोज्दैछन् ।
स्पष्ट नीतिको अभावमा युवाशक्तिको विदेश मोह - यादब देवकोटा
Tuesday, 02.28.2012, 10:15am
आज प्रत्येक नेपाली युवा– शिक्षित, अल्पशिक्षित, अशिक्षित सबैको एउटै चाहना हुन्छ– विदेश जाने । कलेज तह उत्तीर्ण गरेकादेखि लिएर सरकारी उच्च पदमा आसीनहरूमा समेत विदेश पलायन हुने मोह छ । आफूमा भएको ज्ञान, सीप, उर्जा स्वदेशमै उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको प्रचूर अभाव छ र मुलुकको समग्र वातावरण पनि त्यस्तै छ । काम गर्न खोज्नेहरूलाई अवसर छैन ।
Tuesday, 02.28.2012, 10:14am
पूर्ववर्ती व्यवस्था र व्यक्तिलाई दोष दिन जति सजिलो छ त्यति सजिलो आफूले गर्दा हुँदैन । यहाँ विनाविचार हतपतमा निर्णय गर्ने परिपाटी बसेको छ । त्यसबाट पछि आउनसक्ने समस्याबारे विचार विमर्श गरिंदैन ।
Tuesday, 02.28.2012, 10:11am
हाल बहालवाला सञ्चार मन्त्री जेपी गुप्तालाई साढे चार वर्ष पहिले विशेष अदालतले चोख्याएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनवरालोकनका लागि अपील गर्यो ।
» शहीदको अर्थ, परिभाषा र वर्तमानको हुटहुटी - यादब देवकोटा
» क्षितिज कतै पनि उज्यालो नभएको बेला...
» मुलुक विलय हुने कुरा संसद्को विजनेश किन बनेन ? - यादब देवकोटा
» जनताको दृष्टिमा सत्ता र शक्ति “श्वेतपोशी र कालापोशी” को कब्जामा ! : तारानाथ सुवेदी
» “बाबुराम त झन् काम नलाग्ने पो रचन्” : महेश्वर शर्मा
» राष्ट्रिय एकताका सूत्राधार पृथ्वीनारायण शाहबाट सिक्नुपर्ने कुरा : यादब देवकोटा
» सामूहिक राष्ट्रिय पहिचान नै मूल कुरा हो : महेश्वर शर्मा
» वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व असफलताको दिशातिर : यादब देवकोटा
» सत्ता जोगाएर जित्न खोज्ने बाबुराम हारिसके- महेश्वर शर्मा
» अभाव पूर्तिको नाममा व्यक्तिगत लाभको चलखेल : यादब देवकोटा
» जातीय संघीयता ‘घरको न खोप्राको’ : महेश्वर शर्मा
» नेताहरूको विपरीत मतिले पार्टीको थप क्षति नहोस् : तारा सुवेदी
» पूँजीवादको उपहार हो जलवायु परिवर्तन : यादब देवकोटा
Page 19/21: « :: ... 15 16 17 18 19 20 21 »